Suxufiyiin ka socda Qaaradda Afrika oo Tabbabar uga furmay dalka Turkiga.”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Magaalada Istanbuul ee Waddanka Turkiga waxaa maalma ka hor gaaray suxufiyiinka ka kala socday 13 dalka oo qaaradda Afrika ah oo gaaraya ilaa 20 xubnood oo kala matalaya Warbaahinta Afrika, waxaana maanta magaaladaasi uga furmay tababar ku saabsan Warbaahinta casriga ah iyo wadaagista qibradaha warbaahinta dalka Turkiga.
Tabbabarkaan waxaa wadajir isaga kaashanaya Xafiiska Arrimaha Dibadda iyo bulshada ee Madaxtooyada Turkiga (YTB) Xarunta Cilmi Baarista Afrika (AKEM) Hey’adda Cilmi Baarista AFEM iyo Wakaalada Wararka Turkiga ee Anadulu Ajansi.
Tabbabarka ayaa ujeedkiisu yahay kor u qaadista Aqoonta iyo xirfadda Warbaahinta Afrika iyo isdhaafsiga qibradaha labada dhinac.
Waxyaabaha kale ee tabbabarkaan lagu baranayo waxaa qeyb ka ah Warbaahinta casriga ah sida ay horumar uga sameyn karto Qaaradda Afrika iyo Warbaahinta doorka ay ka qaadan karto xoojinta Iskaashiga Afrika iyo Turkiga
Soomaaliya waxaa uga qeyb galaya Tabbabarka Cabdishakuur Cali Axmed iyo Naciima Cabdiraxmaan Macalin Ablaal.
Tabbabarkaan ayaa soconaya mudda sadax todobaad ah waxaana sidookale suxufiyiinta la geyn doonaa xarumaha taariikhiga ah ee dalka Turkiga sida xarumaha dhaqanka.
Suxufiyiinta ka socota Afrika ee ka qeyb galaya tababarkan ayaa sidookale ka qeyb galay Madasha Telefishinka Turkiga ee TRT oo la qabtay 21 kii ilaa 22 kii bishaan October, loogana hadlay dhibaatooyinka ka jira caalamka iiyo fursadaha jira ee lagu xalin karo, waxaana lagu casuumay wafuud heersare ah oo ka qeyb galay doodihii Madasha oo aad u xiisa badnaa.
W/D: Cabdishakuur Cali Axmed